ဖေ့ဘွတ်ခ် – WunYan
​​​ပျော်​ဘွယ်​မြို့နယ်​ ​ကျောက်​ချပ်​ရွာ၌ ခြ​င်္သေ့နှစ်​​ကောင်​မှာ တစ်​​ကောင်​က ​နောက်​သို့ မသိမသာဆုတ်​ခွာ​နေသည်​ဟုဆိုကာ လူအများလာ​ရောက်​ကြည့်​ရှု ​ပျော်​ဘွယ်​မြို့နယ်​ ​ကျောက်​ချပ်​ရွာ၌ ခြ​င်္သေ့နှစ်​​ကောင်​မှာ တစ်​​ကောင်​က ​နောက်​သို့ မသိမသာဆုတ်​ခွာ​နေသည်​ဟုဆိုကာ လူအများလာ​ရောက်​ကြည့်​ရှုပြီး အမျိုးမျိုး​ ပြောဆို​ဝေဖန်​​နေကြ။ Source – Facebook (Unicode Version) ​​ပြျော​ဘှယျ​မွို့နယျ​ ​ကြောကျ​ခပျြ​ရှာ၌ ခွ​င်ျသနှေ့ဈ​​ကောငျ​မှာ တဈ​​ကောငျ​က ​နောကျ​သို့ မသိမသာဆုတျ​ခှာ​နသေညျ​ဟုဆိုကာ လူအမြားလာ​ရောကျ​ကွညျ့​ရှု ​​ပြျော​ဘှယျ​မွို့နယျ​ ​ကြောကျ​ခပျြ​ရှာ၌ ခွ​င်ျသနှေ့ဈ​​ကောငျ​မှာ တဈ​​ကောငျ​က…
ဇနီးမှ ဖေ့ဘွတ်ခ်သုံးတဲ့ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူအား ၆ ပေါင်တူဖြင့် ထုသတ်
စက်တင်ဘာလ ၃၀ရက်နေ့ယနေ့ နံနက် ၂ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ပဲခူးမြို့ ဥဿာ မြို့သစ် ရပ်ကွက်ကြီး (၉)၊ ပွဲစားကြီးကုန်းနေသူ ကိုမျိုးသန့်ဦး အသက် (၃၅ )နှစ်အား ဇနီးဖြစ်သူမလှသင်းကြည် ( ၂၁) နှစ်မှ ၆ ပေါင်တူဖြင့် ထုသတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ကိုမျိုးသန့် ဦး(၃၅)နှစ်၊ မင်းအနော်ရထာ စက်ယန္တရားကုမ္ပဏီလီမိတက် Supervisor ၊ ဖောင်ရွာ၊…
မြန်မာနိုင်ငံက အမှိုက်လုံးဝမရှိပဲ သန့်ရှင်းနေတဲ့ရွာကို တွေ့ပြီ
မြန်မာပြည်က အမှိုက်မရှိတဲ့ ရွာကိုတွေ့ပြီ အမှိုက်မရှိတဲ့ ရွာကိုတွေ့ပြီကွာ။ အိပ်မက်များလားလို့တောင် ထင်မိတယ်။ တကယ်ကြီးပါဗျာ။ ကျောက်တန်းကနေ ၉. မိုင်ခွဲဝင်ရသေးတယ်။ ရွာနာမည်က. ဝဲကြီးရွာ တဲ့။ ကဗျာမဆန်ပေမဲ့ ပနံရတဲ့ရွာပေါ့ ။ အိမ်တိုင်းမှာအမှိုက်အိတ်လေးတွေ ရှိသလို လမ်းဘေးမှာလဲ အမှိုက်ခြင်းတွေရှိတယ်။ ထွက်လာတဲ့အမှိုက်ကို စွန့်ပစ်ဘို့ စနစ်သတ်မှတ်ထားတာကိုက ရွာရဲ့အဆင့်အတန်းပဲ။ အမှိုက်ကင်းစင်ဘို့ ငွေကုန်စရာမလိုပါဘူး။ စည်းကမ်းရိရင် ရပြီ။ ညီညွတ်ကြရင် ရပြီ။မြန်မာပြည်က ရွာတိုင်း၊ရပ်ကွက်တိုင်း…
ARSA အစွန်း​ရောက်​ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကို Facebook အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီ
ARSA အစွန်း​ရောက်​အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကို facebook အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ARSA(Arakan Rohingya Salvation Army)ဟု သူတို့ကိုယ်သူတို့ အမည်တပ်ခေါ်ဝေါ်ကြသည့် အဖွဲ့ကို အန္တရာယ်ရှိသော အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ် facebook မှ တရားဝင်သတ်မှတ်လိုက်ပြီး ထိုအဖွဲ့သည် လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုကာ အမုန်းစကားများဖြန့်ချိရန်၊ အပြစ်မဲ့သူများကိုသတ်ဖြတ်ရန်နှင့် ပြစ်မှုများကျူးလွန်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သောကြောင့် ယင်းအဖွဲ့ကို facebook လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်ကြောင်း facbook မှ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က အတည်ပြုသည်။ Facebook ၏…
အထင်အမြင်နဲ့ လက်တွေ့ ကွဲလွဲခဲ့သော ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု
အထင်အမြင်နဲ့ လက်တွေ့ ကွဲလွဲခဲ့သော ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်က ကျမသုဝဏ္ဏအားကစားကွင်းမှာ နံနက်ခင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးအပြန် ကွင်းပတ်လမ်းမှာ ဘုန်းကြီးတပါးကို ယာဉ်ထိန်းတွေ ဆွဲလားဝိုင်းလားလုပ်ပြီး ကားပေါ်အတင်းတွန်းထိုးဆွဲတင်နေတာမြင်လို့ ကျမရင်ထိတ်သွားတယ်။ ဘုန်းကြီးကလည်းတအားအားအော်နေတယ် ဘုန်းကြီးရဲ့ခြေထောက်မှာလည်း သွေးတွေနဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်လှမ်းပြီး အကူအညီတောင်းမလို့ကြည့် လိုက်တော့ ဘောကန်နေတဲ့လူငယ်တွေကဒီဖြစ်စဉ်ကို သတိထားမိဟန်မတူဘူး။ ဒါနဲ့ပဲကျမ ယာဉ်ထိန်းတွေအနားလျှောက်သွားလိုက်တယ် ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးကြည့်လိုက်တော့ ကျမအထင်နဲ့အမြင်လွဲသွားမှန်း သိလိုက်တယ် ဘုန်းဘုန်းဆွမ်းခံထွက်လာရင်းပုလင်းကွဲရှပြီး…
ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် သာဓုခေါ်… ဘင်္ဂလားနယ်စပ် သံစူးကြိုးကာရန်နှင့် ကာရန်ပြီးနောက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလွှတ်ရန်
အလှူရှင် သီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီဘွဲ့ရ ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်းမှ ဂျင်နရေတာစက်ကြီးများ ထပ်မံလှူဒါန်းလိုက်ပြီ။ ဘင်္ဂလား မြန်မာ နယ်စပ်တွင် ဘင်္ဂလီများခိုးဝင်မှုမရှိအောင် သံဇကာနှင့် သံစူးကြိုးကာရန် ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ ဦးအောင်ကိုဝင်း က သိန်း၃သောင်းကျော် တဦးတည်း မတည်လှူဒါန်းပြီးနောက် ခိုးဝင်မှုမရှိရန် လျှပ်စစ်ဓါတ်များလွှတ်ပြီး ကာကွယ်ဖို့အတွက် မန္တလေးမြို့မှ သီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီ သူဌေးမကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်းက သိန်းထောင့်နှစ်ရာတန် ဂျင်နရေတာ အလုံး၂၀ကို လှူဒါန်းသွားကြောင်း ဂုဏ်ပြုလိုက်ရပါသည်။ Yangon News…
ထိုင်းဘုရင်ကြီးပြောသွားတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်က အရည်အသွေးများ
တစ်ချိန်တုန်းက ယိုးဒယားနဲ့ နယ်စပ်တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်တော့ ယိုးဒယားအိမ်ရှေ့မင်းသား(လက်ရှိဘုရင်)က စစ်ကြေငြာဖို့ ဘုရင်ကို ပြောပါတယ် ဘုရင်က “မင်း(၇)ရက်နဲ့ ရအောင်တိုက်နိုင်လား” မေးမြန်းခဲ့ပါတယ် (၇)ရက်နဲ့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတော့ ယိုးဒယား ဘုရင်က “မင်းဘယ်လိုတိုက်မလဲမေးတော့လေတပ်နဲ့အရင်ဗုံးကျဲမယ် ပြောတော့ဘုရင်ကြီးကပြန်မေးတယ် အဲဒီလေယာဉ်တွေဘယ်ပြန်ဆင်းမှာလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကွင်ကိုဆင်းမှာပေါ့ဆိုတော့ ဘုရင်ကြီးက အဲဒီအချိန်လောက်ဆိုရင် မြန်မာတွေက သိမ်းပြီးလောက်ပြီ´´တဲ့။ “ဒီမယ် သားတော် မြန်မာစစ်သားက စားစရာမရှိလဲ ငှက်ပျောအူစား၊ မျှစ်စားပြီး စစ်တိုက်နိုင်တယ် ရေသောက်စရာမရှိရင်…
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဦးမှ ရခိုင်နယ်စပ် ခြံစည်းရိုးကာရံရန်အတွက် လှူဒါန်း
လူမျိုး ဘာသာမခွဲခြား မြန်​မာနိုင်​ငံသားစိတ်​ဓာတ်​များ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်​ စော်ဘွားလေးဗိုလ်ဗိုလ်မောင်ဆိုင်​မှလည်း ရခိုင်​​ဒေသ စည်းရိုးအမြန်​ဆုံးကာကွယ်​သွားဖို့ စတီးဘလိတ်ဓါးသွား သံဆူးကြိုးတွေလှူပါ့မယ်တဲ့​ဗျာ။ #လမ်းပြကြယ်​ဖြူ Credit to BoBo Maung>ရဲ​ကျော်​သူရ (Unicode Version) အစ်စလာမျဘာသာဝငျ တဈဦးမှ ရခိုငျနယျစပျ ခွံစညျးရိုးကာရံရနျအတှကျ လှူဒါနျး လူမြိုး ဘာသာမခှဲခွား မွနျ​မာနိုငျ​ငံသားစိတျ​ဓာတျ​မြား အစ်စလာမျဘာသာဝငျ​ စျောဘှားလေးဗိုလျဗိုလျမောငျဆိုငျ​မှလညျး ရခိုငျ​​ဒသေ စညျးရိုးအမွနျ​ဆုံးကာကှယျ​သှားဖို့ စတီးဘလိတျဓါးသှား သံဆူးကွိုးတှလှေူပါ့မယျတဲ့​ဗြာ။ #လမျးပွကွယျ​ဖွူ Credit…